Vashandisi veSamsung vava kugona kuedza Linux paDex | Linux Vakapindwa muropa
Linux paDeX iri pano uye yatove mukana weiyo Android mune desktop mode. Kune avo vachiri kusaziva nezve "Samsung DeX" chirongwa iwe unofanirwa kuziva kuti Samung pamwechete neCanonical varikugadzira yakasanganiswa Ubuntu kugovera iyo inonzi "Linux paDex".
Y chirongwa ichi chakatosvika kune mazhinji mafoni achangoburwa uye mahwendefa mhando (Samsung). DeX haisi chirongwa chitsva. Iyo chikuva chave kutomhanyisa Android zvishandiso mu "desktop" nharaunda, zvakada kufanana neWindows, MacOSX uye ChromeOS masystem.
Asi iyo "Linux paDeX" chirongwa chinoda kuenda kumberi, nekuti zano iri rekumhanyisa kugovera kweLinux kubva kune mbozhanhare.
1 Pfungwa iri kuseri kweLinux paDeX
1.1 Inoenderana Galaxy Zviteshi
2 Maitiro ekuyedza Linux paDeX pane yangu Samsung chishandiso?
Pfungwa iri kuseri kweLinux paDeX
Chaizvoizvo pfungwa yeiyi purojekiti ndeyekupa mudziyo wakachengeteka muchishandiso kuwedzera unogadziriswa Ubuntu 16.04 LTS mufananidzo.
Mufananidzo unogona kuurayiwa uye nawo mushandisi achazongofanira kubatanidza keyboard, skrini uye mbeva uye neichi mushandisi ari kushanda sedhizaivhu yake sekunge yaive komputa.
Pasina kupokana, iyi ndiyo nzira inoenda kupfuura iyo yakasarudzika DeX maficha, ayo anongokodzera Android mune desktop desktop.
Iyi "nguva" chirongwa yakanyatsogadzirirwa kune vanogadziraSezvo chikamu chebeta cheLinux paDeX chakaburitswa mukupera kwa2018 uye ichine zvinhu zvakati wandei kupolisha kunze kwemidziyo mitsva inoitwa inoenderana.
Nebasa rekugadzirisa iro rakaitwa mukubatana neCanonical, zvinoita kunge zviri kufamba zvakanaka.
Bvunzo dzakatanga pakati paMbudzi gore rapfuura nekunyoresa kuri nyore uye mhando mbiri dzematerminal: mafoni uye mahwendefa.
Zvakanaka, avo vanoda kuyedza chirongwa ichi uye vaine chimwe chezvikwata zvinotevera vanokwanisa kuzviita.
Inoenderana Galaxy Zviteshi
Samsung Galaxy S9 uye S9 +
Maitiro ekuyedza Linux paDeX pane yangu Samsung chishandiso?
Si mudziyo wako unoenderana neiyo beta vhezheni yeLinux paDeX uye iwe unoda kuyedza. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuenda kunotevera chinongedzo. Pano iwe uchafanirwa kunyoresa.
Ndatoita kunyoreswa, izvozvi unofanirwa kurodha kunyorera "Linux paDeX" pane yako Android kifaa.
Ipapo iwe unozopinda iko kunyorera uye apa uri kuzopinda ne data rawakashandisa kugadzira yako account mune yakapfuura nhanho.
Pakupedzisira chete uchafanirwa kurodha pasi iyo Linux mufananidzo kubva kuseva (otomatiki maitiro). Pakupera kwekuburitswa kwemufananidzo iwe unongofanirwa kuisunungura.
Kana zvimwewo unogona kuikanda paPC yako Kuburikidza neserura, gare gare dhawunirodha chifananidzo, ivo vanongofanirwa kuendesa kune yavo Galaxy chishandiso chakatoburitswa.
Nhanho inotevera ndeiyi gadzira mudziyo, pano uchafanirwa kusarudza mufananidzo kuti ivo vachangobva kurodha pasi. Vachafanira kudaro gadzira uye gadzira mudziyo wako neLinux paDeX.
Kana izvi zvaitwa, imi mose magadzirira kutanga kushandisa Linux paDeX.
Chirongwa Linux paDeX yeApple yakagadzirirwa kumhanya mune yakazara skrini mode. Kuti uwane iyo Android taskbar, hover mbeva yako chirafu kumusoro kana pasi pechiso kweinopfuura 1 sekondi.
Kana ari Mahwendefa, iyo yekushanda modhi yakati siyanei. Sezvo Linux paDeX inobvumira "nyore" mhanya Linux kubva pahwendefa nekubatanidza keyboard uye mbeva.
Parizvino, kuyedza kunogoneka chete paGlass Note 9 uye Galaxy Tab S4 mapiritsi.
Chekupedzisira, tinotarisira kuti nekufamba kwenguva, rutsigiro rwemidziyo mitsva ichatanga kuwedzerwa uye, pamusoro pezvose, ichawedzera kusava nemidziyo mitsva sezvo paine akawanda michina ine maficha anotendera Linux paDeX kumhanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Vashandisi veSamsung vava kugona kuedza Linux paDex
SAMSUNG + ZVINOGONESESA, iko kubviswa kwakaitwa gadget kunosvika!
Ndine iyo DEX yandinonyatsoshandisa kaviri, asi aya maviri SAM + CAN mabhodhi. Ivo zvirokwazvo vakaenda kune akakura marefu kutora hanya neyakavanzika yemushandisi, kana yatove.
Nyasha dzekushandisa Linux ndiyo nharaunda yakachengeteka uye yekudzora yainopa, ini handizive kuti iri kupi kana ichishandiswa nenzira yakatendeseka.